नारालेमात्रै देश बन्दैनः सिभिल इन्जिनियर, बैभव पाण्डेय – || koselinews.com ||
नारालेमात्रै देश बन्दैनः सिभिल इन्जिनियर, बैभव पाण्डेय
September 13, 2016 Loksari kunwar Interview, main_news, News 0
नेपालको सबैभन्दा व्यस्त सडकको रुपमा परिचित नागढुङ्गा–नौबिसे सडक निर्माणको काम तोकिएको समय भन्दा दुइमहिना अगाडीनै सकेर हस्तान्तरण गरेपछि सिभिल इन्जिनियर, बैभव पाण्डेयले वाह वाह कमाए । आफुले जिम्मा लिएका हरेक निर्माणका काममा जिम्मेवार ढंगले खट्नु, टीममा मिलेर काम गर्नु र निर्धारित समयमा काम फत्ते गर्नु उनको पहिचान बन्दै गएको छ । टिकाउ, भरपर्दो र विश्वासिलो ढंगबाट निर्माणका कामगर्ने सिभिल इन्जिनियरका रुपमा परिचित बैभव पाण्डेयसँग कोसेलीन्यूजले सानै उमेरमा सबैको विश्वास जित्नेगरी काम गर्न सक्नुको रहस्य के हो ? भनेर सोधेको थियोः
पेसाप्रतिको इमान्दारि र देशप्रतिको जिम्मेवारीकाकारण जिम्मा लिएका हरेक काम मैले समय सीमाभित्रै सक्ने प्रण लिएको हुन्छ । जसअनुसार मेरो टीम र मैले अरुले प्रश्न गर्ने ठाउँनै नदिएर आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्ने कोसिस गरिरहेका हुन्छौ । कामगर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने असम्भव भन्ने केही छैन भन्ने कुरालाई मैले साबित गरेको हुँ ।
बैभव पाण्डेय, सिभिल इन्जिनियर
नागढुङ्गा–नौबिसे सडक निर्माणको काम तोकिएको समयभन्दा अगाडीनै सक्नु भाको थियो ? त्यो कसरी सम्भव भयो ?
हो, वास्तवमा मलाई धेरैले सोधेको प्रश्न नै यही हो । मैले अघिपनि भनिसके, यदी हामी भित्र कुनै कुरा गर्छु भन्ने अठोट हुने हो भने, त्यो सबै सम्भव हुँदोरहेछ ।
सन् २०१४ मामैले यो सडक निर्माणका लागि कन्ट्रयाक्ट मेनेजरको जिम्मेवारी पाएको थियो । कामसुरु भएको मितिले १२ महिनाभित्र सक्नुपर्ने समय सीमा थियो । तर हामीले तोकिएको समय भन्दा दुइ महिना अगाडीनै अर्थात १० महिनामै काम पुरा गरेर हस्तान्तरण गरेका थियौं । उक्त सडक निर्माण गर्दा हाम्रो टीमले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सडक विभागसँग एकदमै राम्रो ढंगले सहकार्य र समन्वयन गर्यौं । छिटो, छरितो र भरपर्दो तरिकाले काम सम्पन्न गर्नकालागि योजना बनायौं र सोही अनुसार कामपनि गर्यौं । नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त मानिने यो सडक निर्माणका दौरानमा राती ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म त यातायातनै बन्द गरेका थियौं । जुन नेपालको इतिहासमा राती सडक बन्द गरेर काम गरेको यो पहिलो उदाहरण थियो । जसले गर्दा प्रोजेक्टलाई समय भन्दा अगाडी नै सक्न मद्यत पुग्यो ।
अहिले के मा व्यस्त हुुनुहुन्छ ?
नागढुङ्गा–नौबिसे सडक निर्माणको काम सकेपछि कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्मको आठ लेनको सडक निर्माणमा प्लानिङ् एण्ड डिजाइन हाइवे इन्जिनियरको रुपमा कामगर्ने अवसर पाएँ । जसमा मेरो जिम्मेवारी पुलको लेआउट र डिजाइनको थियो । सडकका पुल (bridge) निर्माणको अवधी ६ महिनाको थियो । त्यो पनि समयमै सक्यौं । कलंकीदेखि कोटेश्वरसम्म बनेका ८ वटै पुलहरु सबै नयाँ टेक्नोलोजी अन्तरगत बनेका हुन् । व्यस्त सडकमा कम खर्च र छोटो समयमा यति थेरै पुलबन्नु पनि धेरैकालागि आश्चर्यनै थियो । कतिपयले यो काम ६ महिनाभित्र सकिदैन । समय कम हुन्छ पनि भनेका थिए । तर म र मेरो टीमले समयभित्रै कामगर्ने दृढटा देखाएपछि त्यो सम्भव भयो । हामीले समयमै काम सकेर ह्यान्ड ओभर गरेका छौं । पछिल्लो समयमा म शर्मा एण्ड कम्पनीमा प्लानिङ् एण्ड डिजाइन इन्जिनियरको रुपमा कार्यरत छु ।
के काम गर्छ शर्मा एण्ड कम्पनीले ?
यो नेपालमा ठूलो नाम कमाएको निर्माण कम्पनी हो । यसले नेपालको ठूल ठूला बिल्डिङ् बनाउने र सडक निर्माण गर्ने कामगर्दै आएको छ । नेपालको सबैभन्दा ठूलो बिल्डिङ् भएको अस्पताल मानिने ललितपुरको भैंसेपाटीमा रहेको अस्वीन मेडिकल कलेज लगायत नेपाल राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक केन्द्रीयकार्यालय, सिंहदरबार, सेन्टर पार्क अपार्टमेन्ट विशालनगर जस्ता बिल्डिङ् बनाइसकेको कम्पनी हो यो । त्यस्तै नेपालकालागि ठूलो महत्व राख्ने व्यस्त सडकहरु बेलैया–वुटवलको ६ लेनको सडकपनि यसै कम्पनीले बनाएको हो । साथै अहिले अधिकार सम्पन्न बागमती अन्तरगत अक्टुबर २०१५ देखि बिष्णुमती कोरिडोरको B-2 प्याकेजको कामपनि यही कम्पनीले गरिरहेको छ । विष्णुमतीलाई ढल मुक्त बनाउनकालागि योप्रोजेक्ट सुरु भएको हो ।
यो बाहेक अरु के–के मा आवद्ध हुनुहुन्छ ?
म अमेरिकन सोसाइटी अफ सिभिल इन्जिनियर नेपालको कार्य समिति सदस्य पनि हुँ । यो बाहेक इजरायलको पीआरएस–निओवेभ कम्पनीसँग पनि प्लानिङ् एण्ड कन्ट्री रेप्रिजेन्टेटिभको रुपमा कार्यरत छु । यसले विश्वका ७५ देशमा ठूल ठूला सडक निर्माण गरिरहेको छ । साथै यो कम्पनी नेपालमा पनि कामगर्न इच्छुक देखिएकाले हामी यसलाई नेपालमा भित्र्याउन गृहकार्य गरिरहेका छौ ।
नेपालकै सबैभन्दा व्यस्त मानिने यो सडक निर्माणका दौरानमा राती ८ बजेदेखि बिहान ४ बजेसम्म त यातायातनै बन्द गरेका थियौं । जुन नेपालको इतिहासमा राती सडक बन्द गरेर काम गरेको यो पहिलो उदाहरण थियो । जसले गर्दा प्रोजेक्टलाई समय भन्दा अगाडी नै सक्न मद्यत पुग्यो ।
औपचारिक रुपमाकति पढ्नु भो ?
मैले नेपालइन्जिनियर कलेज, काठमाडौंबाट सन् २०१२ मास्नातक सकेपछि चमेलिया जलविधुत आयोजनामा कामगर्ने पहिलो अवसर पाएको थियो । नागढुङ्गा–नौबिसे सडक निर्माण, कलंकी–कोटेश्वर सडक निर्माणको जिम्मेवारी त्यसपछि मात्रै सम्हालेको हुँ । मेरो औपचारिक शिक्षा पुरा भएको छैन । अहिले कन्ट्रक्सन (construction) म्यानेजमेन्टमा स्नाकोत्तर गरिरहेको छु ।
देश बनाउने हो भने अब युवा पुस्तालाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्ने खालका योजनाहरु राज्यले ल्याउनुपर्छ र लागु गर्नुपर्छ । भविश्य खोज्न पराइको देश पुगेको युवा जमातलाई स्वदेश फर्केर पसिना बगाउन उत्साहित गर्न आवश्यक छ । युवालाई आफ्नै देशमा परिश्रम गर्नकालागि प्रोत्साहित गर्न सके नेपाल बन्न धेरै समय कुनु पर्दैन । त्यसकालागि हरेक युवालाई सिपयूक्त बनाइनुपर्छ । र त्यो सिप नेपालमै प्रयोग गर्न सकिने खालको पनि हुनुपर्दछ । युवाहरुले पनि राष्ट्र र राष्ट्रियताका खोक्रा नारामात्रै लाउनु भन्दा व्यापार व्यवसायमा सहभागि भइ आम्दानीका स्रोतहरु बढाउने तर्फ उन्मुख हुनुपर्छ । बिजनेस नै मुलुकको मुहार फेर्ने सबैभन्दा ठूलो कडी हो ।